Akwụkwọ ndị kacha mma agụpụtara mpụ site n'aka ndị na-agụ akwụkwọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ndị na-agụ akwụkwọ kacha mma agụpụtara maka mpụ
Carmen Guillen | | Genres, Akwụkwọ, Black akwụkwọ, oké ụjọ
Kwuo banyere akwụkwọ akụkọ ojii bụ ikwu banyere Edgar Allan Poe. Ọ bụrụ na anyị ga-anọnyere otu akwụkwọ site n'aka onye edemede na ndepụta a nke akwụkwọ ndị a tụrụ aro (ndị kachasị mma n'etiti ndị na-agụ akwụkwọ) anyị agaghị enwe ọrụ dị mfe ịhọrọ ya, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha mara mma. Mana obughi nani nke Poe anyi g’enweta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ha bụ ndị na-agụ akwụkwọ kacha mma agụpụtara maka mpụ ma si otú a kpebie nke ga-esote ịgụ, ị gaghị echefu ndepụta na-esonụ.
1 "Akụkọ ifo" (Edgar Allan Poe)
1.1 Akwụkwọ data:
1.2 Na nchikota nke akwukwo:
2 "The Adventures nke Sherlock Holmes" (Sir Arthur Conan Doyle)
2.1 Akwụkwọ data:
2.2 Na nchikota nke akwukwo:
3 "Nna nna" (Mario Puzo)
3.1 Akwụkwọ data:
3.2 Na nchikota nke akwukwo:
4 "Onye na-enwu" (Stephen King)
4.1 Akwụkwọ data:
4.2 Na nchikota nke akwukwo:
5 "Aha nke rose" (Umberto Eco)
5.1 Akwụkwọ data:
5.2 Na nchikota nke akwukwo:
"Akụkọ ifo" (Edgar Allan Poe)
Mara: 9 / 10
Na nchikota nke akwukwo:
Na mbipụta a pụrụ iche nke Australia, akụkọ iri na anọ kachasị mma site na Edgar oke Tinye (1809-1849), otu n’ime ndi edemede America a kacha mara amara. Oge Poe na nnabata ya banyere nchegbu nke oge anyị mere ka ọ bụrụ onye ode akwụkwọ dịka ọ dị oke mkpa, yana n'ime akụkọ ndị a, enwere ekele mara nka akụkọ ya yana ezigbo onyinye ya maka iwulite ihe omimi na ụjọ.
"The Adventures nke Sherlock Holmes" (Sir Arthur Conan Doyle)
Mara: 10 / 10
N'agbanyeghị na ọ pụtaworị ọdịdị na "Na-amụ na-acha odo odo" na na "Ihe ịrịba ama nke anọ" , anyị aghaghị ichere ruo mgbe mbipụta nke akụkọ mbụ ndị mejupụtara "The Adventures nke Sherlock Holmes" na Strand magazine maka flamboyant Baker Street onye nyocha iji kpalie ịnụ ọkụ n'obi na ndị na-agụ akwụkwọ nke na-ebelata ruo taa. N'ezie, usoro ndị mepere "Scandal in Bohemia", nke mbido nwere ihe isii, ọ bụghị naanị ka agbatị ya na isii ọzọ, mana ọ ga-ekwe ugbu a Arthur Conan Doyle (1859-1930) ịrara onwe ya nye naanị akwụkwọ. , ọ bụ ezie na ọ bụrịrị na ya na ụlọ ọrụ na-enweghị ike ịkọwapụ na mgbe ụfọdụ na-enweghị atụ, onye na-eme nchọpụta na hypochondriac.
"Nna nna" (Mario Puzo)
Isi ederede: Akpa Zeta
Akwụkwọ nke "Nna nna" n’afọ 1969, ụwa agụmagụ megharịrị. Na nke mbụ ya, Mafia na-agụ akụkọ n'ụdị ma gosipụta ya n'ime. Mario Puzo o gosipụtara ya dị ka ọha mmadụ nwere mgbagwoju anya nke nwere ọdịnala nke ya na ndị isi nnabata nabatabeghị oke mpụ.
"Nna nna" na-akọ akụkọ nke Vito Corleone, onye a kacha akwanyere ùgwù na New York. Onye na-enyere aka aka, onye nwere obi ọjọọ na ndị ya na ya na-emekọrịta ihe, nwere ọgụgụ isi ma kwesị ntụkwasị obi na ụkpụrụ nke nsọpụrụ na ọbụbụenyi, Don Corleone na-achịkwa ụlọ ọrụ gọọmentị nke gụnyere igwu wayo na ịpụnara mmadụ ihe, ịgba chaa chaa na njikwa otu. Ndụ na azụmahịa nke Don Corleone, yana nke nwa ya nwoke na onye nketa Michael, mejupụtara usoro ọrụ a.
"Onye na-enwu" (Stephen King)
Editorial: N'akpa uwe-size
Mara: 8 / 10
Kedu ihe si na Danny Torrance? Chọpụta na njedebe nke olu a, nke gụnyere mmalite nke Dọkịta ụra, ịga n'ihu nke Na-enwu. 'Mgbapu'. Nke ahụ bụ okwu Danny hụrụ n ’enyo. Na, ọ bụ ezie na ọ maghị agụ, ọ ghọtara na ọ bụ ozi ụjọ. Ọ dị afọ ise, na n'oge ahụ, ụmụaka ole na ole maara na enyo na-agbanwegharị ihe oyiyi, ọbụnakwa dị obere ịkọwa ọdịiche dị n'etiti eziokwu na echiche efu. Mana Danny nwere ihe akaebe na enyo ya na enyo ga-emezu: 'Mgbapu'... 'Ogbu mmadu', igbu ọchụ. Nne ya nọ na-eche maka ịgba alụkwaghịm, nna ya, nke ihe ọjọọ jọrọ njọ, nke jọgburu onwe ya dịka ọnwụ na igbu onwe ya, kwesịrị ịnakwere ntụzịaka ahụ maka ilekọta ụlọ nkwari akụ ahụ okomoko, nwere ihe karịrị otu narị ọnụ ụlọ dịpụrụ iche site na snow, n'oge isii Ọnwa. Ruo mgbe ha ghapuru ha ga-anọ naanị ha. Naanị? ...
"Aha nke rose" (Umberto Eco)
N'iji njirimara nke akwụkwọ Gothic, akwụkwọ akụkọ ochie na akwụkwọ nyocha, Aha nke Rose na-akọwa ọrụ nchọpụta nke Guillermo de Baskerville iji kọwaa mpụ ndị emere na Benedictine abbey na 1327. Ọ ga-enyere ya aka na ọrụ ya novice Adso, nwa okorobịa na-eche ihe ndị dị na ndụ ihu na nke mbụ ya, gafere ọnụ ụzọ nke ebe obibi ndị nọn ya. Na nke mbụ a na-egbuke egbuke n'ime ụwa nke akụkọ, nke Umberto Eco rụrụ afọ iri atọ gara aga, onye na-agụ ya ga-enwe atụmatụ na-adọrọ adọrọ na nwughari dị mma nke oge nsogbu na akụkọ ntolite nke West.
Nke a bụ naanị akwụkwọ 5 mbụ kacha jiri ndị ọrụ akụkọ ụgha eme ihe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe 5 na-esote, ka anyị mara site n’ihe ị kwuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ndị na-agụ akwụkwọ kacha mma agụpụtara maka mpụ
Kedu akwụkwọ ị ga-enye ...?
Akwụkwọ na-agụ na awa ole na ole